Ibe akwukwo, Noodle Box, salad Bowl - Haishu
Aging Nkwakọ nri na gburugburu ebe obibi - Biodegradable - Compostable】 Nke a bụ ntuziaka nke ọdịnihu.
:Kpụrụ: iguzosi ike n’ezi ihe, ibu ọrụ, ịrụkọ ọrụ ọnụ, ime ihe ọhụụ
Ọhụụ: Bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ na-akwanyere ùgwù ma bụrụ onye ndu ahịa na nkwakọ ngwaahịa.
Ozi: Itinye aka na ndu ka nma
11years ọkachamara na nka
Akụrụngwa kachasị elu emelitere
Eco Friend na akwukwo ahia
Ọnụahịa ezi uche dị na ya, akwụsi ike
Zaghachi n'ime awa 24
Igbe nri rụrụ arụ
Na-ekpo ọkụ Single Wall Cup
Judin Pack Group bụ onye nrụpụta pụrụ iche nke iko oriri na igbe dị iche iche, dị na Ningbo City, obodo a ma ama na ọdụ ụgbọ mmiri, anyị na-anụ ụtọ njem njem, nke ewetarala anyị ọtụtụ ohere na uru asọmpi n'ahịa mba ụwa. Companylọ ọrụ ahụ enwetala ahụmịhe ọrụ ndị si mba ofesi na ahụmịhe nchịkwa ya, ka ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-eweta oke mkpa.
Dabere na Nchọpụta Egwuregwu Data Bridge Market ahịa maka ụlọ ọrụ biodegradable na akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa plastik na-adabere kpọmkwem na mmụba nke ọha na eze na ndị ahịa. Uche nke ihe bara uru banyere ngwongwo ndị na-emebi emebi na-ebelata mmepe azụmaahịa n'ofe ụwa niile ...
MINSK, 25 Mee (BelTA) - National Academy of Sciences nke Belarus na-ezube ime ụfọdụ ọrụ R&D iji chọpụta ihe dị mma, teknụzụ gburugburu ebe obibi na akụ na ụba maka ịme ihe ndị na-eme biodegradable na nkwakọ ngwaahịa nke ha, BelTA mụtara na Belarusian Natural Resourc .. .
Mpempe akwụkwọ Ederede Nke Akwụkwọ Na-ekwu na Ndị na-azụ ahịa maka njirimara gburugburu ya
Nsonaazụ nke nyocha ọhụrụ nke Europe na-ekpughe na akwụkwọ ndị a na-ede akwụkwọ ka akwadoro ka ọ ka mma maka gburugburu ebe obibi, ebe ndị na-azụ ahịa na-amata nhọrọ nke nchịkọta ha. Nnyocha nke ndị ahịa Europe dị 5,900, nke usoro mgbasa ozi Sides abụọ na nyocha nyocha nke onwe ha mere ...